केपी ओली र प्रचण्डबीच वार्ता, दुवै जना सहअध्यक्ष हुने संकेत ! – Nepali Audio Video
केपी ओली र प्रचण्डबीच वार्ता, दुवै जना सहअध्यक्ष हुने संकेत !
वार्तामा के भयो भन्ने दुवै पक्षले खुलाएका छैनन् । तर, दुवै दलका नेताहरुले शीर्ष दुई नेताबीच भएको संवाद सकारात्मक रहेको बताएका छन् । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘टुंगिने चरणमा छ भन्ने संकेत पाएको छु ।’
स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच नेतृत्वको मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ तर, टुंगिएको छैन । भोलि पनि ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता हुनेछ । दुई नेताबीच सहमति भए पर्सी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर छिट्टै पार्टी एकता हुने सन्देश दिने तयारी छ ।
ओली र प्रचण्ड दुई सहअध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव संक्रमणकालका लागि संयुक्त नेतृत्वको व्यवस्था पनि छलफलमा छ । एकीकृत पार्टीमा तत्काल प्रचण्ड वा ओलीको एकल नेतृत्व सम्भव नभएको भन्दै स्रोतले भन्यो, यसकै छेउछाउ त्यतातिर पो जानुपर्छ कि भन्ने छ ।’
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले एकताबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकार गठन अगाडि पार्टी एकताको प्रारुप तयार हुन्छ । सरकार गठन भएपछि केही समयमा नै पार्टी एकता घोषणा हुन्छ ।